Deeqda federaalka ee dhowaan lagu dhawaaqay waxay taageertaa mashaariicda Badbaadada Bilawga iyo iskaashiga loogu talagalay in lagu caawiyo ganacsiyada gobolka Washington inay dib u bilaabaan, dib u dhistaan ​​oo ay noqdaan kuwo aad u adkeysi badan - Waaxda Ganacsiga ee Gobolka Washington
Bogga ugu weyn|Deeqda cusub ee federaalku shaacisay waxay taageertaa mashaariicda Badbaadada Bilowga ah iyo iskaashiyo loogu talagalay in lagu caawiyo ganacsiyada gobolka Washington inay dib u bilaabaan, dib u dhistaan ​​oo ay noqdaan kuwo adkeysi badan
Deeqda cusub ee federaalku shaacisay waxay taageertaa mashaariicda Badbaadada Bilowga ah iyo iskaashiyo loogu talagalay in lagu caawiyo ganacsiyada gobolka Washington inay dib u bilaabaan, dib u dhistaan ​​oo ay noqdaan kuwo adkeysi badan
Ku haynta dhaqaalaha Washington mid xoogan: Deeqda cusub ee federaalka ee dhawaan la shaaciyey waxay taageertaa mashaariicda Safe Start iyo iskaashiyo looga gol leeyahay in lagu caawiyo ganacsiyada gobolka Washington inay dib u bilaabaan, dib u dhistaan ​​oo ay noqdaan kuwo adkeysi badan
OLYMPIA, WA - Maaddaama hoggaamiyeyaasha gobolladu ay sii wadayaan la-dagaallanka faafitaanka COVID-19, waxay sidoo kale diiradda saarayaan sidii dhaqaalaha Washington loo adkeyn lahaa. Ganacsiyada yar-yar waxay la kulmeen saameynta xun ee COVID-19 siyaabo daran oo inta badan aan sinnayn, taasoo laga yaabo inay cawaaqib xumo muddo dheer ah ku reebto shaqaalaha gobolka Washington, bulshooyinka iyo dhaqaalaha. Si loo taageero dadaallada gobolka ee Badbaadada Badbaadada, Waaxda Ganacsiga ee Gobolka Washington waxay horseed ka noqotay iskaashi gaar ah oo dhex mara hay'adaha dadweynaha, kuwa gaarka loo leeyahay iyo kuwa samafalka ah si looga caawiyo furitaanka ganacsiyada yaryar furitaanka, ilaalinta iyo abuurista shaqooyin, iyadoo sidoo kale horay loo sii eegayo xoojinta qaybaha muhiimka ah mustaqbalka.
Mashaariicdii dhowaan la helay a $ 15 milyan oo deeq ah ka socota Maamulka Horumarinta Dhaqaalaha Mareykanka, oo ah mid ka mid ah deeqaha noocan oo kale ah ee ugu weyn dalka.
Baaxadda caqabadan dhaqaale waa mid aan caadi ahayn. Sida kaliya ee aan run ahaantii uga caawin karno ganacsiyada inay dib cagahooda ugu soo laabtaan oo ay dib ugu soo laabtaan dhaqaalaheena waa iyadoo la keeno heer cusub oo aan caadi aheyn oo wadashaqeyn lala yeesho ganacsigeenna iyo wada-hawlgalayaasha samafalka. Tani waxay si gaar ah run u tahay markaan isku dayeyno inaan wax ka qabanno saameynta kala duwan iyo ismaandhaafka ee aafada, gobol ahaan iyo bulshooyinka aan loo adeegsan, ”ayay tiri Agaasimaha Ganacsiga Lisa Brown. “Waxaan leenahay karti, waxaan leenahay khibrad, waxaan haysannaa maalgelin. Mashaariicdani dhammaantood waxay ku saabsan yihiin isku xidhka qaybahaas si aan si nabadgelyo ah dib ugu furno maanta oo aan u sii wadno dhismaha mustaqbalka sinnaanta, waarta iyo hal-abuurka.
Lacagta deeqda ayaa taageeri doonta dhowr dadaal oo ugu dambeyntii loogu talagalay in lagu caawiyo ganacsiyada yaryar ee Washington iyo xoojinta kooxaha waaweyn ee warshadaha. Qaar ka mid ah mashaariicdu waa cusub yihiin, laakiin dhowr ka mid ah ayaa dhisaya dadaallada hadda socda.
Dib-u-bilaabida mashaariicda waxaa ka mid ah kaalmada farsamo ee ganacsatada iyo ganacsatada ee bulshada aan aqoonta lahayn iyo kuwa aan adeegyada laga helin iyo sidoo kale mashruuc qaab-dhismeedkiisii ​​ugu horreeyay noociisa ah ee COVID-19 kaas oo gacan ka geysan doona saadaalinta iyo kahortagga dillaaca si muhiim u ah, ganacsiyada halista badan leh sida kalluumeysiga, cuntada processor-rada iyo kuwa hilibka gasha ayaa dib u furi kara oo si nabad ah ku furnaan kara.
Dib-u-dhiska mashaariicda waxay siisaa ganacsiyada tiro tababar iyo adeegyo tababar si looga caawiyo inay dib u fakaraan ama ay dib uga fikiraan howlahooda.
Ganacsiga wuxuu iskaashi la yeeshay Jaamacadda Washington State University Xarunta Horumarinta Ganacsiga Yaryar, iskaashiga aan macaash doonka ahayn Dib u bilaabi Wada-hawlgalayaasha, ka Ururka Ganacsiga Washington, Iskaashatada Kordhinta Soosaarka Machadka Qaranka ee Heerarka iyo Teknolojiyada (NIST) Saamaynta Washington, Jaamacadda Washington Machadka Caafimaadka Metrics iyo Qiimeynta (IHME), urur dowladeedka iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay ee uruurinta waaxda badaha Washington Badda Blue, hay'adda maaliyadeed ee horumarinta bulshada ee aan macaash doonka ahayn Golaha Horumarinta Qaranka (NDC), iyo kan Golaha Horumarinta Dhaqaalaha ee Thurston.
Marka la eego deeqda, Ganacsiga iyo la-hawlgalayaasheeda waxay horumarin doonaan oo ay bixin doonaan taageero ballaaran si looga caawiyo ganacsiyada yaryar inay wax ka qabtaan meelaha muhiimka ah ee ay u baahan yihiin, sida ka hortagga infekshinka iyo gudbinta COVID, isku xirnaanta ilaha dhaqaalaha ee adkeysiga degdegga ah iyo mustaqbalka, iyo caawimaad farsamo waxay ka caawiyaan soosaarayaasha inay la qabsadaan hawlgallo ammaan ah oo haddana hufan.
Barnaamijyada qaarkood durba way socdaan halka kuwa kalena wali la horumarinayo. Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan barnaamijyada kala duwan ee taageeraya ganacsiyada yaryar, booqo bogga ganacsiga ee http://bit.ly/wa-covid19.
Eeg / soo dejiso xigashooyinka asxaabteena iyo asalka ururada iyo shaqadooda (pdf)
Arag / soo degso Mashruucyadeenna Bilaabashada ah ee Badbaadada Xaashida Xaqiiqda (Pdf)
← Badaha Buluugga ah, Dekedda Seattle waxay bilawday mawjad labaad oo ah xawaareeye hal-abuurka badda Gobolku wuxuu bixiyaa maalgelin si looga caawiyo kumanaan dad ah oo dheeraad ah gobolka Washington helitaanka daryeelka caafimaadka hab dhaqanka ee u dhow guriga →